အားနာလွန်းလို့ ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အားနာလွန်းလို့ ပါ
Posted by တောတွင်းပျော် on Jan 19, 2017 in Creative Writing | 17 comments
ဆိုင်ကယ်ထိုးရပ်လိုက်တာနဲ့အနားကို ကုလားလေးနှစ်ယောက်
တစ်ယောက်က ကျနော့ဘယ်လက်ကောက်ဝတ်ကနေ လာကိုင်ပြီး
” ဆရာ ဘာယူမှာလည်း .. ဘာကြည့် မှာလည်း
မေးလို့ ရတယ်နော်။ မဝယ်လည်းရတယ် ”
ကျနော်က သူတို့ ဆိုင်တဖက်က ဓါတ်ပုံဆိုင်ကို ပုံကူးဖို့ လာတာ။
သူတို့ ဆိုင်ထဲ ဝင်ဖို့အစီအစဉ်ကမရှိ။
” ငါ့ ညီ .. အကိုက ဟိုဆိုင်မှာ ပုံကူးမလို့ လာတာ ”
” ပုံကူးလည်း ကူးပေါ့ ဆရာ။ ကျနော်တို့ဆိုင်ကိုလည်း ဝင် လေ့ လာလို့ 
ရတယ်ဆရာ။ မဝယ်လည်း ဈေးတွေမေးကြည့် ပေါ့ ”
အတင်းမတရားကြီး ဆွဲခေါ်နေတော့စိတ်ထဲ ဒေါသ ထောင်းကနဲ
စိတ်လျှော့တောပျော် ..
ဒါက သူတို့ စီးပွားရေးလုပ်နေတာ
အထဲက သူတို့ ဘောစိလို့ ထင်ရတဲ့လူရည်သန့် ကလည်း
ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့် !
ဧကန္တ ကောင်လေးတွေကို သူ့ ဆိုင်ရှေ့ ဖြတ်လာတဲ့ လူမှန်သမျှ
မလွတ်တမ်း ဆွဲဖို့မှာထားပုံရတယ်။ ကောင်လေးတွေကလည်း
မရမကခေါ်နေပုံထောက်တော့သူတို့ ဘောစိကို ကြောက်နေရတယ်ထင့် ။
ဒီတော့ လည်း ပြေလည်မှုတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်။
အထဲရောက်တော့ခုနက ဘောစိထင်ရတဲ့ လူက ဆိုင်အလုပ်သမား
” ဒီအကို လိုချင်တာလိုက်ပြပေးလိုက် ”
(ဟွန့် ! သူ့ ထက် အသက်ငယ်တဲ့ကျနော့ ကို အကိုတဲ့)
HD TV တွေ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး လက်ညှိုးထိုးပြီး လိုက်မေးကြည့် လိုက်တာ ကောင်လေးက လိုက်ပြ ရှင်းပြရှာပါတယ်။
ကျနော်ကလည်း ဟိုမေးဒီမေးနဲ့ 
ကြာတော့လိုက်ရှင်းပြနေတဲ့ကောင်လေး သံသယဝင်လာပုံရတယ်။
” ဆရာ! ဘတ်ဂျက် ဘယ်လောက်သုံးမှာလည်း ”
” တစ်ပြားမှ မသုံးဘူး ငါ့ ညီ။ အကို ဝယ်ဖို့မတတ်နိုင်ဘူး။ အရှေ့ က
၂ ယောက် အတင်းဝင်မေးခိုင်းတာ အားနာလွန်းလို့ဝင်လာမေးကြည့် တာ ”
အပြင်ပြန်ထွက်တော့ဆိုင်ရှေ့ က ကောင်လေး ၂ယောက်က
” အဆင်ပြေသလား ဆရာ! ”
အထဲမှာ ကျန်ခဲ့ တဲ့ ကောင်ကတော့ပွစိပွစိ!
has written 51 post in this Website..
ဒေါင်ကျကျ ပြားကျကျ ဒေါင့် မကျိုးတဲ့ လူ
View all posts by တောတွင်းပျော် →
အမေရိကားမှာဆိုရင်တော့. လိုက်ပြတဲ့သူတွေ အလုပ်.. အလုပ်ပြလို့ရသမို့.. ဘာမှမ၀ယ်လည်း ၀မ်းသာတာပေါ့..။
ဝယ်သူ စားသုံးသူတွေ အိနြေ္ဒပျက်ရလောက်အောင်
သူတို့ရှင်းပြတာက တာဝန်အရဆိုပေမယ့်မဝယ်မှန်းသိသွား
မျက်လုံးအကြည့် က ပြောင်းသွားတာ သိသာလွန်းတယ်။
အားနာတယ်ဆိုတာ ဗမာပြည်မှာပဲ ရှိသလားးးးလို့
ဒါကိုက အလိုက်ကန်းဆိုးမသိ အခွင့် အရေးတွေ တက်ယူနေကြတာလေ
သူတို့ ပြောတဲ့ အတိုင်း လိုက်လုပ်ပေးတာ … ဟီး!
မြန်မာပြည်မှာ အရောင်းစာရေးတောင်မှ ပြသနာရှိတယ် .. စိတ်ဓါတ်တွေ .. စိတ်မပါ လက်မပါနဲ့ .. အပြောအဆို အမူအရာကလဲ ရိုင်းပြသေးတယ် ..
မြို့ ပေါ်မှာ ပိုဆိုးတယ်။
စကားတွေ ချိုသာပြဖို့ မလိုပါဘူး။
ဝယ်ယူအားပေး စားသုံးသူကို ကိုယ်အားဖြင့် ဖြစ်စေ
စိတ်အားဖြင့် ဖြစ်စေ အလေးထားကြောင်းပြပေးနိုင်ရင်
ငွေအသပြာကို အခရာ သဘောထားသူတွေက
ပိုဆင်ခြင်သင့် တာပေါ့ ။
ခု သူတို့ ကပဲ အတင်းမရမကခေါ်
မဝယ်ပြန်တော့ လည်း အနောက်က အပြောခံရ။
နောက်တစ်ကြိမ် အဲဒီဆိုင်ကိုတော့ရှောင်ပြီ။
သူငယ်ချင်းတယောက်ဆိုဆိုင်ထဲဝင်ကြည့် အချိန်နည်းနည်းကြာသွားတော့ ပြန်ထွက်ရမှာ အားနာတာနဲ့ သဘောကျတာလေး တခုမေးမိ…
ဝတ်ကြည့်လို့မရဆိုပြီး တော်၏ မတော်၏ မသိရဘဲ ဝယ်လာပြီး အဆင်မပြေတော့ပြန်လဲလို့မရ။
ကိုယ်ကျတော့ ဂါဝန်လေးလှလို့ဆိုပြီး ဈေးမေး ဝတ်ကြည့်လို့ရလား အဆင်ပြေရင်ယူမယ်ဆိုတော့ အစ်မနဲ့တော်ပါတယ် ဝတ်ကြည့်စရာမလိုပါဘူး ဆိုပြီး အတင်းရောင်း…….ဆိုဒ်တော်တာမတော်တာထက် ကိုယ်နဲ့ဝတ်ကြည့်မှ လိုက်ဖက်တယ်ဆိုမှ အဆင်ပြေမှာလေ…..အဲတော့ စမ်းမဝတ်ရရင် မယူဘူးဟယ်ဆိုပြီး အတင်းပြန်ထွက်လာ…အနောက်မှာအတင်းတုပ်ပြီးကျန်ခဲ့လေရဲ့…
နောက်ပြီး ဒဂုံစင်တာ ၂ က Mart မှာကျတော့ ရုံးက နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင်လဲကြမယ်ဆိုလို့ ဘာဝယ်ရင်ကောင်းမလဲ လျှောက်ပတ်ကြည့်…….လုံခြုံရေးကအနားရောက်လာ…..ပထမတော့ သတိမထားမိ…နောက်မှ ကိုယ့်နောက်လိုက်နေမှန်း သတိထားမိတော့ ဆိုင်ကိုတပတ်ပတ်ပစ်လိုက်ပြီး အကုန်လျှောက်ကြည့်ပြီး ဘာမှမဝယ်ဘဲပြန်ထွက်လာလိုက်တယ်………ဝယ်ချင်တဲ့စိတ်တောင်ပျောက်သွားတယ်….အဝတ်အစားကြည့်ပြီး လူကိုသူခိုးလိုလိုထင်နေတုန်း……….တကယ့်သူခိုးတွေဆိုတာ ဘယ်တော့မှ အစုတ်အပြတ်နဲ့မနေဆိုတာ မသိဘူးထင်ပါရဲ့
နိုင်ငံခြားက ကုန်တိုက်တွေမှာက ဈေးဝယ်သူစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်လောက်အောင် မကပ်ဘူး။ လိုအပ်ရင် ကူညီဖို့ လောက်ပဲ မနီးမဝေးက မသိမသာနေပေးတယ်။ လေ့ ကျင့် ထားကြတယ်ထင်ရဲ့ ။ မဝယ်လည်း ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ မဝယ်လို့ နောက်က ပွစိလုပ်မယ်ဆိုလည်း အဲဒီလူကြာကြာမခံဘူး။ တိုင်လိုက်တာနဲ့ ထိတော့ တာပဲ။ ကာစတန်မာကို ဂရုစိုက်ကြတယ်
မျက်လုံးဒေါက်ထောက်အကြည့် ခံရတာကတော့..
ဟိုတုန်းကတစ်ခါ နေပြင်းနေတဲ့ အချိန်
ဗိုလ်တထောင်ဘုရားနားရောက်တော့အေးရိပ်ခိုရင်း အလှူငွေလည်း
ထည့် မယ်စိတ်ကူးနဲ့ဝင်လိုက်တာ ..
ဘုရားလုံခြုံရေးကကောင်တွေ ဝင်ကတည်းက မျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့် 
သွားလေရာအနောက်ကနေ မသိမသာလိုက်ကြည့် ခံရတယ်။
ကျနော်ဝတ်ထားတာက ရိုးရိုး တီရှပ်ပါးတစ်ထည် နဲ့ပုဆိုးပဲ။
သံသယဖြစ်စရာ ပစ္စည်းအပို တစ်ခုခုပါလာရင်တောင်အလွယ်တကူ မြင်သာတဲ့ပုံစံမျိုး။
စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာနဲ့ပြန်လှည့် ထွက်ခဲ့ တယ်။
ပြောရရင် အင်မတန်ရိုင်းတဲ့ဘုရားလုံခြုံရေး တိရစ္ဆာန်တွေ
တခါတလေတော့ လည်း ရန်ငြိမ်းတယ် ကိုစစ်
အားနာလွန်းလို့ဝင်ကြည့်တာပါ ဘာတွေပြောမှန်းသိပ်နားမလည် ပွစိ ပွစိတော့ မပြောနဲ့နော်
အားနားလွန်းလို့ ဝင်ကြည့် သွားတာကိုပဲ